legend brain, Author at Myannewsmedia - Page2of 7
Author: legend brain
ကပ်ရောဂါဆိုးနဲ့ကြုံနေရချိန်မှာ အသက်ပြန်ငယ်ပြီး အများပြည်သူအတွက် စွန့်လွှတ်ပေးဆပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်သူ …
March 25, 2020 legend brain	0 Comments
ရန်ကုန်နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ကျော်သူက အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေများစွာကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မင်းသားတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူက သူ့ဘဝရဲ့ အချိန်တော်တော်များများကို အနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရင်းဖြတ်သန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံး ကပ်ရောဂါဆိုးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ ကျော်သူက သူ့အနေနဲ့
လူ​အချို့ရဲ့​လောဘတက်မှု​ကြောင့် သူမအ​ဖေအတွက် လိုအပ်​နေတဲ့​ဆေး​ဝယ်မရလို့ ဝမ်းနည်း​စွာ​ပြောလာတဲ့မ​အေး​သောင်း …
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်​ကျော်ရုပ်ရှင်သရုပ်​ဆောင်တစ်ဦး ​မ​အေး​သောင်းကို​တော့ ပရိသတ်​တွေ ရင်းနှီးပြီး​လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ မ​အေး​သောင်းက​တော့ မြန်မာဆန်ဆန်​လေး​တွေဝတ်ဆင်​လေ့ရှိတာ​ကြောင့် ပုရိသပရိသတ်​တွေရဲ့ အား​ပေးမှုကိုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူတစ်ဦးဆိုလည်းမမှား​လောက်ပါဘူး​နော်။ သူမဟာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်​နေပြီး ဝါသနာပါရာ အနုပညာအလုပ်ကိုလည်း ဆက်လက်ရိုက်ကူး​နေတဲ့သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မ​အေး​သောင်းက​တော့ အခု​ခေတ်စား​နေတဲ့ tik tok​လေး​ကို စတင်​ဆော့​လေ့ရှိသူပါ။
ကိုဗစ် ၁၉ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြုလုပ်ကာ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ် …
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ စမိုင်းလ်ကတော့ အလှူအတန်းတွေနဲ့ ပရဟိတတွေကို ထိပ်ဆုံးက လုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်လက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ Covid 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် တွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ရှေ့ဆုံးကနေ တိုက်နှိုးဆော်လျက်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲနော်။ ဘာသာရေးလိုက်စားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ်ကတော့ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း
စောင့်ကြည့် (၁၄)ရက် မနေနိူင်တဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေကို တောင်းပန်ဖျောင်းဖျလိုက်တဲ့ ချစ်သုဝေ ….
ချစ်သုဝေက အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်သလို ဆရာဝန်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ပရိသတ်တွေအတွက် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်လေ့ရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ချစ်သုဝေက Covid – 19 ရောဂါနဲ့ ပက်သတ်ပြီး (၁၄) ရက်တာ စောင့်ကြည့်မခံတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေကို အခုလိုပဲ
မင်္ဂလာဆောင်ကို ရက်ရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ အိမ့်ချစ်ချော. ..
Cele Connections ပရိသတ်ကြီးရေ.. အိမ့်ချစ်ချောလေးက (၂၀၁၉)ခုနှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးလဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁)ရက်နေ့ မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ရှေ့ စင်ပေါ်ကနေ ချစ်သူဖြစ်သူ နေဝင်းရဲ့ စပရိုက်လုပ်ကာ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခံခြင်းကို ခံလိုက်ရတာပါနော်..။ အိမ့်ချစ်ချောကတော့ Travel Blogger
အိမ်တွင်းပုန်းပြီး လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အရာလေးကို ချပြလာတဲ့ ဖွေးဖွေး …
CeleConnections ပရိသတ်ကြီးရေ ဖွေးဖွေးဟာ အမြဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို မင်းသမီးတစ်ယောက်လိုမတွေးဘဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ဖွေးဖွေးဟာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု (၃)ဆုပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင် အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိထားသူဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်စနိုးနဲ့ ဖွေးစိန်လို့ ခေါ်လေ့ရှိကြပါသေးတယ်။ ဖွေးစိန်လေးကတော့ အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးလေးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့အညီ အလှူအတန်းတွေကိုလည်းရှေ့ဆုံးကနေ
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက ဘစိုင်းတို့လိုသက်ကြီးပိုင်းတွေ ဂရုစိုက်ပါလို့ပြောတဲ့ ပရိသတ်ကို ပြန်လည်ကျီစယ်ခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် …
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က အသက် (၄၀) ကျော်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ငယ်ငယ်ကအတိုင်း ပြောင်းလဲမှုမရှိ နုပျိုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသွားသည့်တိုင် ငယ်စဉ်အတိုင်း ပုံစံမပြောင်းသွားတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကို ပရိသတ်တွေကလည်း “ဘစိုင်း” လို့ ချစ်စနိုးနဲ့
[စုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာ​ကြေး​လေး​တွေစုကာ ဆန်နဲ့ဆီကို ရပ်ကွက်သူ/သား​တွေကိုလှူဒါန်းမယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင် ….
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်​ကျော်ဟာသသရုပ်​ဆောင်လူရွှင်​တော် ခင်လှိုင်ကို​တော့ ပရိသတ်​တွေရင်းနှီး​လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်က​တော့ သရုပ်​ဆောင်ပိုင်းမှာ​ကော လူရွှင်​တော်ပိုင်း​တွေပါကျွမ်းကျင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်လက်ဆိုလည်းမမှား​လောက်ပါဘူး​နော်။ ခင်လှိုင်ရဲ့သားသမီး​တွေကလည်း အနုပညာပိုး​ပါတာ​ကြောင့် အနုပညာလမ်းကိုလည်း ​လျှောက်လှမ်း​နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခင်လှိုင်က​တော့ သူရဲ့ အနုပညာ​ကြေးရတဲ့​ငွေ​ကြေး​တွေကို အလှူအတန်း​တွေမှာ လှူဒါန်း​လေ့ရှိသူတစ်ဦးပါပဲ​နော်။ မတ်လ(၂၂)ရက်​နေ့မှာ ခင်လှိုင်က​ ရသမျှအနုပညာ​ကြေး​လေး​တွေကိုစုကာ
သမီးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အသိကြောင့် အရင်လို စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါနိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ချစ်သုဝေ …
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်လည်းဖြစ်၊ ဆရာဝန်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေက အခုဆိုရင် သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါ ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အလုပ်တွေ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေသလို ချစ်သုဝေကလည်း သူမတစ်ယောက်တည်းနဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ရင်း သမီးတွေကို ထ်ိန်းကြောင်းခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောထားပါတယ်။
ရောဂါရှိသူ (၃၃)ယောက် လို့ကောလဟာလ ဖြန့်တဲ့ အသံပိုင်ရှင်ဟာ သူမ မဟုတ်ကြောင်း ပြောလာတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို …
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုဟာ အများနဲ့မတူတဲ့ အသံပါဝါကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူ့ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တိုင်းက သူ့အသံကိုအသည်းစွဲမှတ်မိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လို ထူးခြားတဲ့အသံပိုင်ရှင်က ယခုအခါမှာတော့ ပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းနေရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လတ်တလော ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
” ​ပြန်မရနိုင်​တော့တဲ့တန်ဖိုးကြီး အမှတ်တရ​တွေကို ချပြလိုက်တဲ့ AR-T “
“ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားအောင် သူမရဲ့ ဝတ်စားထားရာနေရာလေးကို ချပြလာတဲ့ မြူလင်းကိုကို”
APRIL ၁ ရက်နေ့မှာထားခဲ့တဲ့ချစ်သူကို APRIL FOOL လုပ်တယ်ထင်ပြီး အခုထိစောင့်နေတုန်းပဲလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း
“သူမရဲ့​စေတနာ​ကောင်းမှုအကျိုး​ကြောင့် ထီဆုကြီး​ပေါက်လို့ ပျော်မဆုံးဖြစ်​နေတဲ့​မေကဗျာ”
” အိမ်ထဲမှာပဲနေနေတာကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလေးကို ကာတွန်းပုံလေးနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ နာမည်ပြောင် ပေးလိုက်တဲ့ ခေးဆက်သွင် “